Xog cusub: Doorashada Galmudug oo ay dhici karto in looga adkaado dowlada | Caasimada Online
Home Warar Xog cusub: Doorashada Galmudug oo ay dhici karto in looga adkaado dowlada
Xog cusub: Doorashada Galmudug oo ay dhici karto in looga adkaado dowlada
Dhuusomareeb (Caasimada Online) – Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka soconaya loolan xoogan oo siyaasadeed, kaasoo looga soo horjeedo Dowladda Federaalka Somaliya, oo iyadu wadato musharax ay la dooneyso inuu ku soo baxo Doorashada Xafiiska Madaxtooyada Galmudug.
Arbacadii ayaa waxaa Magaalada Dhuusamareeb ku midoobey musharaxiinta kala ah Cabdullaahi Wehliye Faarax, Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) iyo Kamaal Daahir Guutaale, ka dib markii ay xaqiiqsadeen in Villa Somalia ay ka go’an tahay inuu doorashadan ku soo baxo Qoor Qoor.
Waxaa xusid mudan haweenka Galmudug oo ka careysan in aanan Baarlamaanka Galmudug laga siinin qoondadii haweenka ee ahayd boqolkiiba soddon (30%) ay qayb ka yihiin qorshaha lagu doonayo in lagu curyaamiyo damaca Villa Somalia iyo musharaxeedaba.
Iyadoo aad arki karto sida ay Dowladda Somaliya ugu dhex-milantay geedi-socodka doorashada Galmudug ayaa waxaan dhanka kale la difiri karin culeyska muuqdo kaga soo wajahan dhinacyada aan ku aragtida ahayn siyaasadda dalka.
Markaad si dhow u daraareyso dagaalka siyaasadeed ee ka soconaya Magaalada Dhuusamareeb iyo dhinacyada kala duwan ee ku lugta leh ayaa bayaansan kartaa in loolankan ay dhici karto in looga adkaado Dowladda Federaalka.
Si kastaba ha-ahaatee bulshada reer Galmudug iyo beesha caalamkaba oo doorkoodu uu ku soo uruuray inay indhaha uun ka daawadan waxa ka soconaya Dhuusamareeb ayaa dhanka kale la dhacsanayn hardanka ay dowladdu ka oogtay Xarunta Gobolka Galgaduud, sidoo kalena waxaa la dhihi karaa waa kuwo ku taamaya inaysan natiijada doorashadu noqon mid rabitaan-gelisa aqalka dalka looga arrimiyo.